काभ्रे भीडन्त : गोली चलाएर प्रहरीले विप्लवका २ कार्यकर्ता समात्यो
नेपालपाना प्रकाशित: २०७५-१२-६ गते
काठमाडौं । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाबाट हतियारसहित खटिएको प्रहरी टोलीले काभ्रेको रोशी गाउँपालिकामा गोली प्रहार गरि प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका २ जना कार्यकर्ता समातेको छ । साथै, राजधानी काठमाडाैंबाट पनि अन्य दुई जना पक्राउ परेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस : काभ्रेमा प्रहरी र प्रतिबन्धित पार्टीका कार्यकर्ताबीच दोहोरो भीडन्त !
प्रतिबन्धित पार्टीका नुम बहादुर विक, विशाल तामाङ, शिव धिमाल र विकेन्द्र राई प्रहरी नियन्त्रणमा परेका हुन् । नख्खुस्थित एनसेल कार्यालय र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रोहन गूरूङको घरमा भएको बम बिस्फोटमा संलग्न भएका व्यक्तिहरू नै समातिएको प्रहरीले दाबी गरेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस : विप्लवलाई गोली हान्न ओली-प्रचण्डको निर्देशन
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ताले काभ्रेमा गतिविधी गरिरहेको सूचना पाएकाले पछिल्लो कारबाही गरेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरी महाशाखाको टोली काभ्रे गएको जानकारी जिल्लास्थित प्रहरी कार्यालयलाई समेत विस्तृतमा थाहा नभएको बुझिएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस : प्रतिबन्ध लागेपछि विप्लवको कडा विज्ञप्ति ! भने : प्रचण्डले टाउको लतारेर गद्दारी ग-यो (विज्ञप्तिसहित)